Best 24 Feather Tattoos Design ho an'ny lehilahy sy vehivavy - Tattoo Ideas Art
Ny tsara indrindra 24 tapa-totozy hevitra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 9, 2016
Ny tatoazy dia karazana lamaody tsara fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia mandeha hanova ny faritra sasany amin'ny vatany. Rehefa manana tatoazy lehibe ianao dia ho tia sy hankasitraka izany ny olona. Tena ho tia tattoos amin'ny volonao ianao rehefa mahita azy ireo.
Tattoo tazo dia mety midika hoe foto-kevitry ny fahalalahana satria mifandray amin'ny vorona. Ny biby dia raisina ho bibidia maimaim-poana ary izany no mahatonga azy ireo afaka manidina avy any amin'ny faritra iray manerana an'izao tontolo izao. Ny mpitovo iray na ny volo maro dia afaka miresaka momba ny fitadiavana fahafahana. Ary koa, ny #feather dia miresaka momba ny singa amin'ny hetsika, hevitra, fahafaha-mifandray ary ny fahaiza-manitsy. Ny volom-borona dia afaka maneho ireo izay efa nodimandry, fifandraisana amin'ny maty.
Tattoos volo ny sasany amin'ireo tatoazy tsara indrindra azonao jerena. Zava-mahadomelina sy manokana. Tsy ny olon-drehetra no hitanao ireo tatoazy ireo. Rehefa mitady tetikasa #tattoo hikatsaka ny fanafahana anao ianao, ity tatoazy ity dia iray ihany ny handehanana noho ny hatsarana sy ny dikany. Izy ireo koa dia manolotra fanomezana avy any an-danitra. Ny volon'antsy koa dia midika hoe Fahalalahana, Fahamarinana, Fahazavana, Speed, Fiakarana, Fahafatesana, Fanahy mahery, Dreams, Fahadiovana, Herim-po, Fampanantenana, Herimpo, Fanantenana, Fifandraisana amin'ny lafiny hafa, Fiainana ny fanahy, Travel, Magic, Levitika ary tsy fahampian-tsakafo. Ny tatoazy dia tsara tarehy mba hanome anao an'io toetra io izay ilainao. Misy karazana tatoazy maro azonao ampiasaina amin'ny fanovana ny fomba fijerinao.
1. Tapa-tavy tato anaty tato ho an'ny vehivavy
Efa nahita an'ity karazana tatoazy ity ve ianao taloha? Maro ireo vehivavy mampiasa ny tatoazy vita amin'ny volom-borona satria tsara sy mahafinaritra ihany koa izy io.
2. Tato anaty loko marevaka amin'ny tasy
Tsy misy ampahany amin'ny vatanao izay tsy ahafahanao manosotra azy. Na izany aza dia tsy maintsy milaza aminao ianao fa tokony hahafantatra ny dikan'ny tatoazy izay tianao hampiasaina.
3. Vorona marevaka sy loko volomparasy ho an'ny tanana
Misy dikany maro ny fampiasanao ny tatoavin'ny volombava. Ny tatoavin'ny tazo dia mifandray amin'ny fahafahana. Fantatray fa ny vorona dia an'ny vorona ary ny vorona dia fantatra ho maimaimpoana.
4. Flying hevitra tato anaty tattoo amin'ny rantsana vehivavy
Rehefa manana tatoazy maromaro na maromaro amin'ny volom-borona ianao, dia afaka milaza fotsiny fa mitady fahafahana ianao.
5. Ny vorona sy ny tato-tsavily amin'ny endriky ny zazavavy dia miverina
Tattoo toy izany no tsy tena miresaka momba ny fahalalahana, afaka miresaka hevitra izy. Ny volom-borona dia elanelan'ny rivotra ary raha misy ifandraisany amin'izany dia midika izany fa mieritreritra ny hahazo zavatra lehibe na miavaka ianao.
6. Ny teboka tapa-tati-tenda ho an'ny ankizivavy
Ny tatoazy toy ity dia azo alaina amin'ny endriky ny vatany. Rehefa manana izany eo amin'ny faritry ny vatanao ianao, dia tsy mitsahatra mijery tsara izy.
7. Vorona marevaka sy ravin-damosin'ny volom-borona ho an'ny lamosina
8. Voromailala kely sy kely tato an-tato an-damosin'ny vehivavy
Ny fandaniana an'io tatoazy io dia mety tsy ho lafo tahaka ny eritreritrao. Maro ireo tolotra an-tserasera izay ahafahanao mahazo tatoazy amin'ny vidiny sarobidy.
9. Ny tattoo-tattoo-tsavily ho an'ny zazavavy dia miaraka amin'ny hafatra
Ny zava-drehetra tokony hataonao dia ny mametraka fanontaniana ary rehefa manao izany ianao, dia ho afaka hahazo ny artista tsara indrindra sy sarobidy izay afaka manome endrika tsara anao.
10. dia fehin tato ho an'ny tato fanoratana hevitra ho an'ny vehivavy
Tsy misy fanavakavahana eo amin'ny lahy sy vavy raha ny tatoazy toy izao. Ny fomba fiasa tatoazy dia lasa fitaovana lamaody dia manjary mahita lehilahy sy vehivavy izay vonona ny hiditra amin'ny #design tahaka izao.
11. Sleeve tato ho an'ny tato ho an'ny tovovavy
Tsy azonao atao ny mandà fa tsy mahafinaritra ny tatoazy. Rehefa manana tatoazy toy ny mahavariana toy izao ianao dia maro ny olona no hijery izany hatrany.
12. volom-borona tato ho an'ny vehivavy
Ny mijery chic dia ny mahazo tattoo mahatalanjona. Tsy misy filazalazana momba ny halalin'ny vahoaka hiresaka momba ny hatsaran'ny tatoahanao raha tsy manodidina anao.
13. Tolo-tsavily feno tato-toto ho an'ny vehivavy
Izany no mahatonga ny olona maro mampiasa ny mpanakanto ankehitriny mba haka tatoazy mahavariana tahaka izao. Amin'ny fiafaran'ny andro dia ianao no tokony hankasitrahan'ny rehetra. loharanon-tsary
14. Cool kiho tatoazy ho an'ny vehivavy
Ny volom-borona dia mora ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny vatan'olombelona, ​​dia mahafinaritra sy tsara tarehy izy ireo. Ny ampahany sasany amin'ny vatana izay misy volo dia misy fiantraikany goavambe, eny an-damosina, na ny tongotra na ny fanondrony. Tsy afaka mitsambikina avy eo am-pandriana ianao ary mifidy volom-borona nefa tsy mahalala na inona na inona. loharanon-tsary
15. Forearm ravina sy ravin-tatoazy ho an'ny zazavavy
Ny vorona dia avy amin'ny vorona samy hafa ary midika zavatra hafa amin'ny olona izy ireo. Na izany aza, ny volo dia mijoro ho an'ny fahafahana. Vitsy dia vitsy monja no mihazona any amin'ny fahababoana nefa ny ampahany lehibe amin'izy ireo dia hita mihodidina ny tany tsy misy fetra. loharanon-tsary
16. Tovolahy volom-boay tato an-tànana ny tazan'ny ankizivavy
Rehefa mahita anao amin'ny volom-borona ny olona, ​​efa mahatsapa ry zareo fa miresaka fahalalahana na mitady fahalalahana ianao. loharanon-tsary
17. Tapa-tavy tsara tato-tenda amin'ny lehilahy fitaovana
Ny fampiasana tattoos volo dia afaka manambara zavatra toy ny singa iray. Ny volom-borona dia afaka maneho ny fahamendrehana, fahalalaham-pitenenana, #ideas ary maro hafa anisan'izany ny fahaiza-miteny. Raha efa nahamarika ianao dia ho tsapanao fa misy karazana tato-tsavily maro eto amin'izao tontolo izao. loharanon-tsary
18. Sarin'akanjom-bavaka tapa-tati-body ho an'ny zazavavy
Azonao atao ny maneho ny fahasamihafana ara-panahy amin'ny volom-borona ary ho an'ireo loham-poko nentim-paharazana, afaka hampiasa an'io tatoazy io izy ireo. loharanon-tsary
19. Mandala ary tapa-doko tato ho an'ny vehivavy
Tokony ho fantatrao fa ny elatry ny voromahery dia maneho herim-po sy herim-po, ary ny paka dia voninahitra sy hatsaran-tarehy ary ireo vorona hafa dia mbola manana ny dikany. loharanon-tsary
20. Tato anaty tazo ho an'ny tasy
Ny volony dia tsy goavambe ary afaka mifanentana ny ampahany amin'ny vatana. Afaka mamorona zavatra maro manodidina ny volonao amin'ny volonao ianao. loharanon-tsary
21. karan-doha ary tato-tsavim-peo ho an'ny lehilahy amin'ny sandriny
Raha tianao ny zavatra hafa toy ny rose, ny biby, ny ara-panahy na ny zavatra mety tianao hampiana ny volonao, dia azo atao izany. loharanon-tsary
22. Vorona misy vorona sy tape-tavy ataon'ny tady ho an'ny vehivavy
Ny zavatra voalohany soso-kevitrao dia tokony hipetraka sy hanao ny fikarohana momba ny vorona sy ny volony. Rehefa vita ianao dia fidio ny volonao ary manapaha hevitra ny ampahany amin'ny vatanao izay tianao hanoratana azy. loharanon-tsary
23. Toto-totoo tato ho an'ny tato ho an'ny lehilahy
Rehefa tsy maintsy nahazo izany fampahalalana izany ianao dia tokony hitady mpanakanto iray, izay hamorona an'io volom-borona io eo amin'ny vatanao. loharanon-tsary
24. Tapa-kevitra amin'ny tato an-tseo amin'ny teboka amin'ny hafatra, indray andro any dia hanidina 'ho an'ny vehivavy
Misy toerana maromaro ahafahanao mahazo mpanakanto izay hamantatra ny tatoazy. Tena zava-dehibe ny fifanakalozan-kevitra eo aminao sy ny mpanakanto anao. Ny tsy fahazoan-kevitra dia mety hiafara amin'ny fanolorana hevitra ratsy momba ny volonao izay tianao. loharanon-tsary
25. Tato anaty volom-boay tato ho an'ny tanana
tattoos voronafitiavana tatoazytattoo eyeeagle tattoostato ho an'ny vatofantsikatattoos mpivadytattoos ho an'ny lehilahymozika tatoazytattoos sleeveelefanta tatoazyscorpion tattoonamana tattoos tsara indrindraTattoo Featherloto voninkazokoi fish tattoomoon tattoosdiamondra tattoohenna tattootattoo cherry blossomAnkle Tattoostatoazy voninkazotattoos rahavavytattoostattoo octopusanjely tattoostratra tatoazytattoos backTatoazy ara-jeometrikatattoos armtattoo infinitytattooscat tattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoo watercolormasoandro tatoazytattoos foottattoos crosscompass tattootatoazy fokoHeart TattoosNy zodiaka dia mampiseho tatoazymehndi designarrow tattoorip tattoostattoos mahafatifatyraozy tatoazytattoo ideastanana tatoazytatoazy lololion tattoos